कोरोना संक्रमणमा अमेरिका पहिलो बन्यो, ट्रंप भन्छन् अमेरिका ‘लक डाउन’ गर्न बनेको देश होइन ! « Etajakhabar
कोरोना संक्रमणमा अमेरिका पहिलो बन्यो, ट्रंप भन्छन् अमेरिका ‘लक डाउन’ गर्न बनेको देश होइन !
प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार १०:०३
अमेरिका : चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमण हुनेको संख्यामा सयुंक्त राज्य अमेरिका पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। बिहीबारसम्म संक्रमितको संख्यामा आधारमा अमेरिका तेस्रो नम्बरमा थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा संक्रमितहरुको संख्या ८३ हजार ८ सय नाँधेको छ। बिहीबार मात्रै १४ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएपछि, अमेरिका पहिलो नम्बरमा परेको हो। अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छ
चीनमा हालसम्म करिब ८१ हजार ७ संक्रमितहरु देखिएका छन्। अर्काे प्रभावित राष्ट्र इटालीमा करिब ८० हजार ५ सय संक्रमित देखिएका छन्। अमेरिकामा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या १२ सय नाधेको छ। भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले प्रयासहरु जारी राखेको भएपनि अमेरिकामा यो संख्या एक लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। यहाँ कोरोनाको संक्रमणबाट उपचार गरी रिकभर हुनेहरुको संख्या एकदमै नगन्य छ ।
अमेरिका सबै राज्य यो महामारीका कारण प्रभावित छन्। जसमध्ये न्यूयोर्क राज्यसबै भन्दा बढ्ता प्रभावित देखिन्छ। यस राज्यमा बिहीबारसम्म ३७ हजार भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। यसै राज्यका भने ३८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
न्यूयोर्क राज्यका पाँच बोरो अर्थात पाँच सहरमा मात्रै २१ हजार भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्,। यिपाँच सहरमा करिब १ करोड मानिस बसोबास गर्दछन्। यस्तै दोश्रो धेरै प्रभावित हुने राज्यमा न्यूयोर्कसँगै जोडिएको राज्य न्यूजर्सी हो। जहाँ ६ हजार ८ सयजना संक्रमित भएका छन्, भने ८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
त्यसपछि क्रमश क्यालिर्फोनिया, मिचिगन, वासिङटन, फ्लोरिडा, लुजिआना, पेन्सलभेनिया, टेक्सास, जर्जिया, कनेक्टिकट, टेनिसी राज्यमा १ हजार भन्दा बढ्ता व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन्। अन्य राज्यहरुमा संक्रमितको संख्या केही कम भएपनि सबै राज्यमा यसको प्रभाव प्रतिदिन बढीरहेको छ।
अमेरिकाका प्राय राज्यहरुमा त्यहाँका गर्भनरले अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरु बन्द गर्नु भन्ने आदेश दिएको भएपनि पछिल्लो तीनदिनको गतिविधि हेर्दा मानिसहरुको चहलपहल उस्तै देखिन्छ। बिहीबार धेरै मानिसहरु घर बाहिर निस्किएका देखिन्थे।
विश्वभरका देशहरुमा महामारीको फैलाएको कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्यामा अमेरिका पहिलो हुँदासमेत सरकारले पूरै देश लकडाउन गर्ने बारेमा कदम चाल्ने संकेत देखिएको छैन। यहाँका सरकार प्रमुखहरुले अबको दुई साताभित्र पूरै नियन्त्रणमा आउने भनेर दैनिक प्रेस ब्रिफिङ गरिरहेका छन्।
प्राय राज्यका अस्पतालहरु भरिभराउ रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। मानिसहरुलाई घरबाटै अनलाइन आवेदन भरेर मात्रै अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थामा जान भनिएको छ। न्यूयोर्क राज्यमै नर्स काम गर्ने एक नेपालीले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै अस्पतालमा थाम्नै नसक्ने गरी बिरामीहरु आइरहेका जानकारी दिइन्।
बुधबार अमेरिकाको प्रतिष्ठित सञ्चार संस्था न्यूयोर्क टाइम्सले न्यूयोर्कको कुइन्सस्थित एल्मष्ट अस्पतालमा न्यून संख्यामा भेन्टिलेटर भएको र शवहरु राख्नका लागि ठूलो आइस ट्रक बाहिरै खडा गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कमजोरी भन्दै टिप्पणी गर्न थालिएको छ।
अमेरिका चीन, इटालीपछि क्रमश स्पेन, जर्मनी, इरान, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, यूके, साउथ कोरिया लगायतका देशहरुमा धेरै प्रभाव देखिन्छ।
काठमाण्डौं – कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको स्वास्थ्य स्थिर भए
आज पनि उत्पत्यामा थिपिए कोरोना संक्रमित
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएकाे छ । योसँगै कुल
विश्व सिनेमा जगतमा चर्चित व्यक्तित्व अमिताभ बच्चनको परिवारका ५ जना सदस्यलाईनै कोरोना संक्रमण
काठमान्डौ – भारतीय सिनेमा जगतको उच्च प्रतिष्ठा स्थापित गर्दै विश्व सिनेमा जगतमा चर्चित व्यक्तित्व अमिताभ
ललितपुरमा एक व्यक्तिले १२ जनालाई कारोना सारेको पुष्टि
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा केही दिनयता कोरोना संक्रमतिको संख्या बढिरहेको बेला ललितपुरमा एक व्यक्तिले १२
पाल्पामा दाहसंस्कार गरिएका व्यक्ति जीवित भेटिएपछि…
२८ असार २०७७, आईतवार १४:४९